मैले बुझेको राजनीति - EAAWAJ (इ-आवाज)
हाँसेकालाई रुहाउँने रहेछ राजनीति
सद्देलाई कुहाँउने रहेछ राजनीति
धेरै कुराको अनुसन्धान गर्न र पढ्नुभन्दा पनि राजनीति के हो ? र कस्तो रहेछ अनि राजनीतिको उद्देश्य र यसको मूल बाटो कुन हो तनि भन्ने कुरा बुझ्न धेरै कठिन रहेछ । जन्मदेखि चुलोचौको घर आँगन पनि पँधेरा, वनपाखा, खोलानाला, आसी, नाम्लो, कुटो कोदालो, हलो, जुवाँ, भिर, मैदान, उकाली, ओराली गर्दै गाई, भैँसी, बाख्रा, चराचुरुङ्गी प्रकृतिको भाषा बुझ्ने म आजसम्म पनि राजनीति बुझे्की नै रहेनछु ।
विचरी ! म गाउँले पाखे, अनपढ मान्छे । किनकी हाम्रो घरमा राजनीति हुँदैनथ्यो । वनपाखा, खोलानाला कुटो, कादालो गाई, भैँसी, बाख्रा, चराचुरुङ्गीले राजनीति गर्दैनथ्यो । हाम्रो चुलो चौकोमा कहिल्यै राजनीतिको गन्ध आउँदैैनथ्यो । त्यसैले पनि राजनीति के हो भन्ने कुरा थाहा नै भएन । हामी प्रकृतिको रुप हेरेर त्यसैलाई संसार देख्ने गाउँले, पाखे, गरिब नपढेको अनपढ मान्छे । सहरमा पढेलेखेका भाषण गर्न जान्ने मान्छेहरुलाई महान ठान्थ्यौं । उनीहरु वुद्धिजीवि ठान्थ्यौं । आहा ! कति राम्रा सुकिला सुन्दर मान्छेहरु ठान्थ्यो । अहो ! यो ठान्नु गलत रहेछ ।
संसारका धेरै राम्रा ठाउँहरु राजनीतिले ओगटेको रहेछ । पद पहुँच सबै राजनीतिले दिएको रहेछ । बल्ल बुझ्दैछु राजनीति । देशका कुना कप्चामा रहेका दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले डिग्रीका सर्टिफिकेट लिएर खाडी मुलुकको मरुभूमिमा किन पसिना बगाउँदैछन् ? कति मानिसहरु सहरको सडक पेटीमा भैतारिँदै छन् ? किन सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसारको सर्टिफिकेट र योग्यता हुँदाहुँदै पनि असक्षम ठहरिन्छन् । जुनसुकै ठाउँमा पनि राजनीतिको पहुँच हुनेहरुले स्कुल पढ्दा–पढ्दै पनि कहाँबाट आयो कलेजको सर्टिफिकेट भन्ने कुरा बल्ल बुझ्दैछु । सधै सत्य बोल्ने मान्छेहरु राजनीतिका कारणले गर्दा असत्य ठहरिएका रहेछन् । असत्य गर्ने मान्छेहरु राजनीतिको आडले गर्दा साधु र सन्त भएका रहेछन् भन्ने कुरा बुझदैछु । हामी पैयुँको लौरो टेकेर उकाली ओराली गर्ने हामी गाउँले अनपढ मान्छे हामीलाई के थाहा राजनीतिको लौरोले जस्तोसुकै पहाड पनि सजिलै उकाल्छ भन्ने कुरा के थाहा ? हामी पैयुँको लौरो टेकेर उकाली ओराली गर्न मान्छेहरुलाई यही राजनीतिको लौरो र पहुँच नहुदाँ धेरै सक्षम मानिसहरुले दुःख पाएका रहेछन् । असक्षम ठहरिएका रहेछन् भन्ने कुरा यतिबेला यो कोरनाको महामारी र फुर्सदको समयमा धेरै कुराको अध्ययन गर्ने र सुन्ने र हृदयमा मनन् गर्ने समय मिल्यो राजनीति गर्न केही व्यक्तिहरुलाई नियाली रहँदाखेरी केही बुझ्न सकेकी भन्ने लाग्यो ।
यो माहामारीको अवस्थामा पनि एकथरी राज्यले केही गरेन भनेर उफ्रनेको जमात देखे । एकथरी राज्यले राम्रो गर्यो भनेर कुर्लनेको जमात देखे । एकथरी ताली मात्रै बजाउनको जमात देखे ।् एकथरी जता पनि खोकेको खोकै गर्नेको हुल देखे तर सत्यलाई सत्य हो र असत्यलाई असत्य हो भनेर औंला ठडाउने कोही देखिन । एका दुई सुन्नमा आएपनि भोलि पल्टैदेखि जुन सत्यलाई सत्य र असत्यलाई असत्य हो भन्ने मान्छेलाई उस्तै पुरै पागल, बहुला हुन्न भन्न समेत पनि पछि नपर्ने मान्छेहरु देखे । त्यसैले मलाई राजनीति सबैभन्दा फोहोरी लाजनीति लाग्यो र यो लेख लेख्न बाध्य भएँ । हामी सबै नेपालीहरु हाम्रो राष्ट्रिय झण्डा नै सबैको ढुकढुकी हो भन्ने कुरा कसैले हेक्का नै गरिएन । जुनसुकै पार्टीमा आवद्ध भए पनि आफ्ना–आफ्ना पार्टीका झण्डा बोके पनि यी सबै विभिन्न राजनीतिका झण्डा बोक्ने नै नेपाल आमाका सन्तानहरु हौँ भन्ने कुरा पनि हेक्का रहेनछ । जुन भाई जुन बाटो हिँडे पनि आखिर यही धर्तिमा टेकेर हिडेका छौँ । बाटो फरक भएपनि गन्तव्य एउटै हो । हामी सबैले राष्ट्र हँसाउनु पर्छ र नेपाल आमाको रक्षा गर्नु पर्छ भन्ने कुराको ख्याल नगर्दा आज छिमेकी दलालहरुले हाम्रो धर्ति अनि हामी नेपाली मनहरु छिन्नभिन्न पारेका रहेछन् की सायद हाम्रो नेपाली भूमि र नेपाली मन एकता चाहाँदैन कि ? भन्ने कुरा यो मनमा कता–कता चिसो पसिराछ । त्यसैले पनि राजनीति स्वार्थभन्दा पनि नेपाली एकता ठूलो हो ।
देश र धर्तिको रक्षाका लागि हामी सबै एक भएर काम गर्नु पर्छ । सक्षम र नैतिकवान व्यक्तिहरुले ठाउँ पाउनु पर्छ । सक्षम व्यक्तिहरुलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ भन्ने कुराको आवाज हो । मेरो मात्रै एकल आवाज हैन यो राष्ट्र र राष्ट्रियताको आवाज हो । अबका दिनहरुमा राजनीति कै कारण अपराधि साधु नबनोस् । साधु र सञ्जन व्यक्ति राजनीति कै कारणले अपराधि नबनोस् जबसम्म राजनीतिले सत्य र शान्तिको बाटोमा हिँड्दैन । सत्य र शान्ति चाहाँदैन, तबसम्म राष्ट्रमा कहिल्यै शान्ति र खुसी आउँदैन यो भन्दा पनि धेरै दुःख कष्ट र अपराध भोग्न र देख्न पर्ने अवस्था आउने छ । मन्दिरमा भगवान बस्न सक्ने छैनन् । अनि धर्तिमा असल र सञ्जन मान्छेहरु बाँच्न पाउने छैनन् ।
अन्नपूर्ण–२, ढिकुरपोखरी, कास्की
← देशभर ठूलो पानी पर्ने, सजग रहन महाशाखाको आग्रह
‘मेरो श्रीमानलाई बचाइदिनुस्’-पुतली परियार →